Iziqalo - AfricArXiv
In ukushicilelwa kwezemfundo, isimaphambili yinguqulo yomfundi noma iphepha lesayensi eyandulela ukubuyekezwa kontanga okuhlelekile nokushicilelwa ku a ukubuyekezwa kontanga isazi noma umagazini wezesayensi. I-prerint ingahle itholakale, imvamisa njengenguqulo engeyona ye-typet etholakala mahhala, ngaphambi nange / noma ngemuva kokushicilelwa kwephepha kwiphephabhuku.
Kusuka ku-Wikipedia, i-encyclopedia yamahhala // Bona futhi: Umbhalo wesandla (ukushicilela)
Ukuhamba komsebenzi okusungulwe emhlabeni jikelele kokwabelana ngemiphumela yezifundiswa kungukushicilela kwephephabhuku. E-Afrika, omagazini abaningi banyatheliswa ngokubhaliwe kuphela, ngaleyo ndlela izindatshana ezishicilelwe lapha ngeke zitholakale.
Abaphenyi base-Afrika babhekene nezinga eliphezulu lokwenqatshwa kokuthunyelwa kumajenali aphesheya (entshonalanga), ngenxa yezizathu ezahlukahlukene kubandakanya ukwenzelela esifundeni noma uhlelo lolimi kanye nezinkinga zokufomatha. Eminye imingcele ngama-APC kanye nokufinyelela kwimininingwane yolwazi yasentshonalanga yokubuyekezwa kwezincwadi.
Ama-preprints inguqulo yokugcina yombhali futhi ingabiwa ku-inthanethi mahhala. Uma kwabelwana ngaso endaweni egcina izifundiswa ezikhethekile ezimele, njengaleyo ehlanganiswe ne-AfricArXiv, imibhalo yesandla eyamukelwe izonikezwa ilayisense (imvamisa ne-CC-BY), inikezwe nge-doi futhi ifakwe ku-database yesayensi eyidijithali - ngaleyo ndlela ibeka kuqala ukutholwa kombhali futhi nokwenza umsebenzi uthande futhi ngasikhathi sinye utholakale. Leli fomu lokugcina umlando laziwa njenge Ukufinyelela Okuvulekile Okuhlaza.
I-AfricArXiv nayo iyakwamukela ukulethwa kwe- okushicilelwe ngemuva - inguqulo yesandla yendatshana ngemuva kokubuyekezwa kontanga nangaphambi kokuhlelwa nokufomethwa. Amaphephabhuku amaningi akhokhisa imali ukuthola inguqulo yokugcina efomethiwe yendatshana yocwaningo. Ngokwabelana ngohlobo lwephepha olubukeziwe ku-AfricArXiv, izifundiswa ziqinisekisa ukuthi umsebenzi wazo ungatholakala mahhala.
Yini Preprint ngu asapbio.org
Uhla lwemigomo nezinqubomgomo zokwenziwa kweseva engaphambili
Beck, J., Ferguson, CA, Funk, K., Hanson, B., Harrison, M., Ide-Smith, M.,… Swaminathan, S. (2020, Julayi 21). Ukwakha ukuthembela kokushicilela: izincomo zamaseva nabanye ababambe iqhaza doi.org/10.31219/osf.io/8dn4w
USoderberg Courtney K., Errington Timothy M., uNosek Brian A. (2020) Ukuthembeka kwezimpawu zangaphambi kwesikhathi: inhlolovo eyahlukene yezinhlaka zabacwaningi. R. Soc. vula isayensi.7201520 http://doi.org/10.1098/rsos.201520
URouhi S, (Disemba 2019) "Ukuphrinta noma cha? Yiziphi izindleko zamathuba zocwaningo lwangaphambilini, olungabuyekezwa kontanga? I-PLOS blog
ISarabipour S, uDebat HJ, u-Emmott E, uBurgess SJ, uSchwessinger B, uHensel Z (2019) Inani lokubekwa kuqala: Umbono womcwaningi wamakhono wasekuqaleni. I-PloS Biol 17 (2): e3000151. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000151
I-Speidel R & Spitzer M (2018) Preprints: The Yini, The Kungani, The. Isikhungo se-Open Science - I-Blog. cos.io/blog/preprints-what-why-how/
UTennant J, Bauin S, uJames S, noKant J (2018). Ukuvela komhlaba okuqhamukayo: Umbiko wesingeniso seqembu elisebenza ngolwazi lwe-Knowledge Exchange kumakhontrakthi wokuqala. doi.org/10.31222/osf.io/796tu
IVianello, SD (2021). I- “Pre” ku- “Preprint” [yami] ngeye-Pre-figurative. Indawo ejwayelekile. https://doi.org/10.21428/6ffd8432.5de25622